Maxay yihiin baaxadda ganacsiga ee soo saarayaasha lathe CNC tayo sare leh
Cinwaanka: waa maxay baaxadda ganacsiga ee soo-saarayaasha lathe CNC tayo sare leh In warshadaha makiinadda CNC, soosaarayaasha wax soo saarka lathe CNC caadiga ah waxay jecel yihiin inay qabtaan meheradda caadiga ah ee aluminium ka baaraandegidda, maareynta qaybaha naxaasta ah, iyo qaybo ka mid ah, way diidaan inay aqbalaan meheraddaas, ...
Intee ayey ku egtahay xilliga jiilaalka
Bilowgii khilaafaadka ganacsiga Sino ee Mareykanka, warshadaha wax soo saarka qalabka, sida warshadaha kale, waxay bilaabeen qabowga qabow ee dhaqaalaha. Warshado kala duwan ayaa lagu xukumay isla natiijada. Dhammaan shirkaduhu ma rabaan laakiin waa kuwo aan awood u lahayn inay ka baxaan. Wadaxaajoodyadii soo noqnoqday ee Sino dagaalkii ganacsiga Mareykanka ...
Sida loo sameeyo shaqo wanaagsan oo ku saabsan dib u soo celinta nidaamka alxanka ee hiitarka kuleylka
Reflow tiknoolajiyada alxanka ayaa ah geedi socod aad muhiim ugu ah howsha hiitarka kuleylka. Codsiga tiknoolajiyada dib-u-cusbooneysiinta ee warshadaha soo-saarka elektiroonigga ah waa mid aad u ballaaran. Faa'iidooyinka geeddi-socodkani waa in heer-kulku fududahay in la xakameeyo, alxanka ...
Sida loo aqoonsado qaybaha wax lagu shaabadeeyo qalabka tayo sare leh, maxay tahay faahfaahinta in fiiro gaar ah loo yeesho
Sida loo aqoonsado qaybo tayo sare leh soosaarayaasha soo saarayaasha ayaa aad uga walaacsan soo saarayaasha badan. Qiyaasta qalabka wax lagu shaabadeeyo qalabka waxay u dhexaysaa hal feer ilaa boqolaal saxaafadda ah. Xadka ugu hooseeya ee warshaduhu waa mid ka mid ah sababaha tirada badan ee shaabbadda qalabka ...
Farqiga u dhexeeya xarunta makiinada guud iyo Xarunta Xawaaraha Sare ee NC
Xaqiiqdii, ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya xarunta mashiinnada dhaqameed ee CNC iyo xarunta xawaareynta sare ee CNC. Gaar ahaan muuqaalka qalabka mashiinka, ma jiro farqi u dhexeeya xarunta mashiinka xawaaraha sare ee CNC iyo xarunta guud ee mashiinnada tamarta. Waa maxay int ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya ka shaqaynta lathe caadiga ah iyo kumbuyuutarka xakamaynta tirada
Waa maxay farqiga u dhexeeya ka shaqaynta lathe caadiga ah iyo kumbuyuutar xakamaynta kumbuyuutarka Qalabka farsamaynta badan ee farsamaynta, farsamaynta caadiga ah ee lathe sidoo kale waa mid ka mid ah qalabka farsamaynta farsamada ee muddada dheer qaatay oo aan la tirtirin. R ugu weyn ee ...
Digniinta warshadaha ee baahida loo qabo talantiyeynta waxsoosaarka warshadda saxda ah ee CNC
Dadka ku hawlanaa saxitaanka warshadaha wax soo saarka CNC sanado badan waa inay ogaadaan in warshadda wax soosaarka saxda ah ee CNC ay sidoo kale loo yaqaanay warshada wax soo saarka gong computer ka hor. Sanadkii 2000, dad badan ayaa si caadi ah loogu yeeraa warshadda saxda ah ee farsamaynta CNC sida kumbuyuutarka ...
Falanqaynta rajada wax soo saarka farsamada iyo warshadaha wax soo saarka
Marka laga eego aragtida dhaqaalaha adduunka, booska wax soo saarka farsamada iyo ka shaqeynta ee dalal kala duwan wuu ka duwan yahay, laakiin waddamada badankood wali waxay u tixgeliyaan wax soo saarka farsamada iyo farsamaynta inay yihiin warshadaha wax soo saarka aasaasiga ah ee dalka. Sababtoo ah warshadaha wax soo saarka aasaasiga ah ee mec ...
Sida nidaam ahaan loo maareeyo loona shaqeeyo qaybaha soo saarayaasha si loo hagaajiyo faa'iidooyinka shirkadaha
Warshadaha wax soo saarka, soosaarayaasha ku howlan ka shaqeynta qeybaha farsamada ayaa ka dhib badan howlgalka iyo maareynta marka loo eego kuwa ku jira warshadaha elektaroonigga ah, oo ka tirsan shirkadaha leh jawi liita iyo asalka aqoonta hoose. Sidee ayay tahay in qaybaha farsamada ...
Xalka khaladaadka qalajinta
Dadka ku hawlan warshadaha makiinadaha sanado badan waxay badanaa la kulmaan in ka dib marka la farsameeyo, cabirka badeecada lama balan qaadi karo mana buuxin karo shuruudaha sawirada. Caadi ahaan, waxaan ku sifeynaa dhacdadan natiijada ka dhalatay qaladka qalabka. Alaabta la xoqay ayaa keentay ...
Way adag tahay in dadka lagu qoro warshadaha qashinka. Xagee dadku aadeen
Dhawaan, sanadka cusub ee soo socda, warshadaha makiinadaha ayaa wajahaya dhibaatada qorista. Haddii uusan jirin wax amar ah oo laga walwalo, sidoo kale waxaa laga walwalaa amar, mana jiro hawl wade. Kumaa samaynaya? Waxaan rumeysanahay inay tani tahay codka aqlabiyadda badan ee ka shaqeynta ...
Hay'adkee ayaa soo xushay tobanka magac ee kuleyliyaha Guangdong
Sida aan wada ogsoonahay, mashiin kasta oo raadinta ah, ilaa iyo inta aad ku dareyso tobanka darajo ee sumadeeyaha calaamadaha shucaaca, waxaa jiri doona natiijooyin aad u badan, taas oo ka dhigaysa dadka doonaya inay jawaabta ka helaan iyada oo aan ciirsi lahayn. Waa maxay sababta tan? Waqtigan xaadirka ah, warshadaha wax soo saarka Shiinaha ayaa ku jira booska hoggaamineed ee ...